Orinasa tsy miankina: mihiboka tanteraka ireo mpiasa marefo | NewsMada
Orinasa tsy miankina: mihiboka tanteraka ireo mpiasa marefo
Tsy ho an’ny minisitera sy ireo sampandraharaha miankina amin’ny fanjakana ihany. Notapahin’ny vondrona telo tonta, ny minisiteran’ny Asa sy ny fampananan’asa , ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy niaraka tamin’ny vondron’ny mpampiasa mahasolo tena sy ny vondron’ny sendikan’ny mpiasa, omaly, fa mijanona mihiboka tanteraka any an-trano fa tsy mamonjy toeram-piasana ireo mpiasa marefo, amin’ny orinasa tsy miankina.
Hatao izany ho fitsinjovana ny ain’izy ireo amin’izao fiparitahan’ny valanaretina covid-19 izao. Navoaka, araka izany, ny naoty mampilaza ireo orinasa na rafitra mampiasa olona ary ireo mpiasa rehetra fehezin’ny fehezan-dalàna fa tsy tokony hamonjy ny toeram-piasana intsony aloha ireo mpiasa rehetra manana soritr’aretina na toe-pahasalamana mety hahamora ny fifindrana na hanasarotra ny fitsaboana ny aretina vokatry ny otrikaretina coronavirus.
Araka izay azony atao sy ny karazan’asa sahaniny, ny mpampiasa no tokony hametraka fepetra hahafahan’izy ireny miasa any an-trano. Ny tsy fahatongavana miasa mihoatra ny 15 andro noho ny fisian’izany soritr’aretina izany amin’ny mpiasa iray ao amin’ny orinasa dia tsy azo sokajiana ho fampiatoana ny fifanarahana arakasa.
Io toe-pahasalamana io sy ny tsy fahatongavana miasa aterany dia tsy maintsy voamarin’ny dokotera avy ao amin’ny toeram-pitsaboana misahana ny mpiasa ary nankatoavin’ny mpampiasa.
Ho an’ireo orinasa izay tsy manana toeram-pitsaboana manokana dia ny dokoteram-panjakana eny amin’ny hopitaly no manamarina io tsy fahatongavana miasa noho ny antony ara-pahasalamana sy faharefoana io.
Mihatra eny anivon’ny orinasa tsy miankina rehetra, araka izany, ny fampitsaharana ireo mpiasa marefo amin’ny asany aloha, amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.